Expressing Myself: June 2013
समृद्ध तर कमजोर भारत ?
भारतमा नियमित र निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ, समावेशी राजनीतिक व्यवस्था र उदाउँदो अर्थतन्त्र छ, गरिबीको खाडलबाट जनजीवन धमाधम मध्यमवर्गमा रूपान्तरित हुँदै छ । तरपनि गुरुचरण दासको सोंचमा भारत दिनानुदिन असफल राष्ट्र बन्दैछ । यो भारतीय प्रजातन्त्रको पहेली पनि हो । आफ्नो पुस्तक ‘अ लिबरल केस फर अ स्ट्रङ स्टेटः इन्डिया ग्रोज एट नाइट’ मा दासले भारतलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाउने मन्त्रहरू दिएका छन् । कमजोर राज्य संयन्त्र भएपनि भारत विश्वशक्ति बन्ने होडमा किन दगुरिरहेको छ ? तीब्र प्रगतिबाबजुद मध्यमवर्ग किन असन्तुष्ट छन् ? चीन र अमेरिकालाई टक्कर दिन भारत कहिले सफल हुन्छ ? यस्ता प्रश्नका सहज तर दर्शनमिश्रित उत्तर छन् पुस्तकमा । त्यहाँको प्रशासन, प्रहरी र न्यायमा सुधार आए मुलुक बलियो विश्वशक्ति बन्ने जिकिर गदै दासले यी तिनै पक्ष एकअर्काका परस्पर विरोधी भएकोले नै भारत कमजोर हुँदै गएको हो भन्छन् ।
Gurucharan Das_book review_CP Aryal
आधुनिकीकरण र विकासको प्राचिन सिद्धान्तअनुसार राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकास सँगसँगै भएमात्र राष्ट्र सफल बन्न सक्छ । भारत स्वतन्त्र भएर नेहरुको नेतृत्व पायो । उनले अँगालेको समाजवादी धारले भारतको आर्थिक विकासलाई द्रुत बनाउन चाहिँ सकेन । राजनीति अघि बढ्यो तर अर्थतन्त्र जहिँको त्यहीँ । यही थियो समस्याको जड, दास भन्छन् । फेरि, इन्दिरा गान्धीको कालमा उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षाको कारण भारत नराम्रो गरी पिल्सिएर कमजोर बन्यो । त्यसैले स्वतन्त्रतापछिको भारतले एउटा ‘मोहनदास गान्धी’ खुब मिस गर्छ ।